Ururada mucaawinimada: "Qorshe uma hayno halka dadkan lugu meeleen doono" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Warqada ay heeyada socdaalku u soo dirtay dadka uu sharcigani saameeynayo. sawir: Anna Nyström/Sveriges Radio.
Ururada mucaawinimada: "Qorshe uma hayno halka dadkan lugu meeleen doono"
"Awood aan ku caawino dadkan ma hayno"
La daabacay onsdag 1 juni 2016 kl 14.06
Laga bilaabo maanta, kowda bisha juun, ayey dawladdu lacagaha ka jaraysa qaxootiga diidmada helay. Sido kale ayuu sharciga dawladdu soo dejisay sheegaya in dadkani xaq u lahin guryaha ay ku jiraan, tan ayaa ka dhigan in ay ku khasbanyihiin in ay furaha guryahan dhiibaan.
Islamarkaas ayaa laga qaadaya kaadhka aqoonisga , LMA kort, waa kaadhay heeyadani siiso dadka jawaabta sharciga sugaya.
Go´aanka dawladda ayaa u jeeda in aaney heeyada socdaalku haysanin meel ay ku meeleeyso qaxootiga sharciga sugaya, sidaas daraadeed ayaa la doonaya in dadka diidmada helay laga saaro guryahan dabeetana dibada la dhigo si boos loogu baneeyo dadka sharciga sugaya ee aan diidmada helin.
Hasayeeshe halkee ayaa dadka u sharcigani saameeynayo la geeynaya, halke lugu meeleyn doona.
Raadiyaha Iswiidhan l´aanta afka soomaaliga ayaa wacday ururada mucaawinimada. Ururka lanqeeyrta cas ayaa farriin mail ah nugu soo dirtay in ay warbixin ku saabsan sharciga cusub u gudbin doonaan dhamaan qeeybaha ururkan iyo in ay indhaha ku hayn doonan si u arrinkani u socdo, hasayeeshe in aaney haysan qorshe ku saabsan si ay u caawin lahaayeen dadkan. Sidaas waxaa sheegay Fredrik Hammarbäck oo qeeybta saxaafada u qaabilsan ururka lanqeeyrta cas.
Waxaan kale wacnay Stadsmissionen oo ah urur madaxbanaan oo gacan siiya dhalinta, caruurta, iyo dadka ay hoy la’aanta ku dhacdo. Marika Markovits, oo ah agaasimaha ururkan ayaa dhaleecaynaysa sharciga cusub ay dawladdu soo dejisay.
-Waxaan sharcigan cusub u arka khatar, madama ay dawladdu masuuliyada, in dadkan la caawiyo, ku soo wareejisyay ururada mucaawinimada oo maanta ku mashquulsan in ay caawiyaan dadka bulshadda ku dhibaateeysan. Wakhti iyo awood aan ku caawino qaxooti ay dawladdu ka saartay guryihi ay iyagu ku meeleyeen ma haysano, ayey sheegtay Marika Markovits oo ah agaasimaha ururkan.
Fredrik Landqvist ayaa ka hawlgala ururka Refugees Welcome. Ururkan ayaa la asaasay dayrtii hore markii ay qaxootiga ugu faraha badan Iswiidhan yimadeen. Landqvist ayaa sheegay in aanu war ka hayn sharciga cusub.
-Waxaa anaga na misaaniyadgelisa bulshadda. Marka ma odhan karo in aanu haysano qorshe diyaar ah oo ku saabsan si dadkan loo caawin lahaa. Hadii aan bulshadda caawimaad ka heli karno waan soo dhaweeynayna, laakin anagu waxaan nahay urur madaxbanaan, awood aan anagu dadkan keligeen ku caawino ma hayno, ayuu sheegay Fredrik Landqvist oo hawlgala ururkan.
Booliska iyo heeyada deymaha khasabka ku soo celisa, ayaa khasab ku saaraysa dadka diida in ay guryaha ka baxaan. Waa sida uu sharcigani sheegayo.
Sharcigan ayaan qabaneeyn dadka xanuusanaya ee caafimaadkoodu liito. Sidaas waxaa sheegay Sverker Spaak oo ka hawlgala heeyada socdaalka.
Qaxootiga Restad Gård oo guryaha laga saarayo todobaadka dambe